Daacish-ta Soomaaliya oo dharbaaxo kulul ku dhacday | KEYDMEDIA ENGLISH
Waxaa laga dilay xubno dhowr ah oo ay ku jiraan hogaamiyeyaal sare, sida lagu sheegay war kasoo baxay taliska Ciidanka Puntland.
BOOSAASO, Soomaaliya - Ciidamada Puntland ayaa jab xoog leh gaarsiiyay Kooxda Daacish kadib howlgallo xiriir ah oo ay ka fuliyeen dhulka buuralayda ah, ee ku yaalla gobolka Bari.
Saraakiisha Ciidanka PSF, oo la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in ay la wareegeen degaannada Dhabancado, Hul-caanood iyo Togga Il-Cameyra oo ka tirsan Calmiskaad, halkaas oo dhufays u ahayd Daacish.
Dagaal culus ayaa labada dhinac ku dhexmaray degaanada kahor inta aysan qabsan Ciidanka Puntland, iyadoo wararka soo baxaya ay sheegayaan in dagaalyahano iyo hogaamiyeyaal sare looga dilay Kooxda argagaxisadda iska hor-imaadka.
Horaantii bishan waxay Ciidanka Puntland ku dileen nawaaxiga Qandalla Muuqaal-duube [Cameraman] katirsan Daacish iyo xubin kale kadib markii kolonyo Military halkaasi qaraxa lagula eegtay, oo ragga la dilay ay duubayeen.
Puntland ayaa sheegtay inuu sii socon doono howgalka inta Daacish iyo Al-Shabaab laga saaraya Buuraha Galgala iyo Golis, oo ku dhaw magaaladda Boosaaso, oo ah isha dhaqaalaha Maamulkan ku yaalla waqooyiga Bari ee Soomaaliya.
Comments Topics: daacish puntland soomaaliya